Conte oo albaabka ka xirtay Milan iyo Juventus: Cuadrado waa laacib ka tirsan Chelsea” – Gool FM
Conte oo albaabka ka xirtay Milan iyo Juventus: Cuadrado waa laacib ka tirsan Chelsea”
Liibaan Fantastic August 3, 2016
(London) 03 Agoosto 2016 Tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa albaabka ka xirtay kooxaha Milan iyo Juventus kuwaas oo aad u doonaya laacibkiisa Juan Cuadrado.
28 jirka reer Colombia ayaa amaah hal xiliciyaareed ah ku qaatay Juventus halka Milan ay doonayso in dhankeeda ay amaah ku hesho laakiin Conte ayaa muujiyay inuusan diyaar u ahayn iibka Juan Cuadrado.
“Cuadrado waa laacib ka tirsan Chelsea” ayuu yiri tababare Antonio Conte oo qabtay shir jaraa’id xili uu si gaar ah uga hadlayay mustaqbalka laacibkiisa.
“Si adag ayuu u shaqaynayaa si adag ayuuna tababarka noola qaadanayaa, qof walba waa ogyahay waxa aan ka aminsanahay Juan Cuadrado, qof walbana waa ogyahay in laacibiinta fiican ay helayaan xiiso badan suuqa kala iibsiga”.
“Haatan isagu waa laacib ka tirsan Chelsea waana uu ku faraxsanyahay, haaddii aad i waydiiso wixii dhici doona mustaqbalka, ma awoodo inaan kaaga jawaabo Juan Cuadrado iyo ciyaartoyda kaleba”.
Ancelotti oo iska fogeeyay in kooxdiisu ay la soo wareegayso Bastian Schweinsteiger
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: FC Barcelona - Leicester City 4-2 (Messi oo muuqaal cusub leh & maqaawiirtiisa oo Leicester 4 u miisay)